Tenenina foana fa he-e-eh: Rehefa tsy hendry dia miadia
2009-10-01 @ 23:20 in Politika
Maro zavatra tian-ko tenenina aho fa misy ny laharam-pahamehana angamba dia ny sabotsy 3 oktobra sy ny tohiny aloha no tiako tsinjovina. Miala tsiny dieny mialoha aho fa hasiaka, ary matoa manao izany aho dia fitiavako tsy hahamaty momoka ny tolona no antony. Ny mpanaraka ity bolongana ity dia mety hahatsiaro tsara fa efa nisy lahatsoratra nosoratako mitondra ny lohateny hoe : "Madagasikara: Hetsika lehibe amin'ny Asabotsy 3 oktobra 2009". Tery aho nanoratra tamin'iny fotoana iny satria toa adinodino ny famondronana na famoriana ny legalista etsy Ankorondrano. Ninia aho nanoratra mialoha tamin'io fotoana io hoe ao Ankorondrano Magro ihany no fotoana ifanomezan'ny rehetra. Ny toeran-kafa rehetra raha amin'izao fotoana izao, amin'ny fijeriko manokana, dia fandrika ho an'ny legalista hatrany... na dia misy aza izay lazaina fa fanomezan-dalana. Olona tsy mitana ny teniny sy tsy manome hasina ny soniam-pifanarahana norangotiny ve no hitokisanao?
Ianareo angamba ataoko fa efa nahatsikaritra avokoa fa tsy ankasitrahako mihitsy ny fivoahana an'i magro, ary tsy voatery ho tsy fitokisako ny ankolafy roa hafa, fa ny legalista hatrany aloha no voaenjika sy mahazo baomba mandatsa-dranomaso isak'izay mandeha toeran-kafa. Voalohany, raha niezaka ny hametraka teti-panorona tsikelikely teto aho tamin'ny alakamisy 10 septambra 2009 tamin'ny alalan'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe : "Inona aloha no atao raha hampandroso ny tolona?" ,dia tratran'ny hazakazaka arahin-tosika tamin'ny alalan'ny fahatongavan'ny solontenan'ny ankolafy Zafy Albert tao amin'ny Magro. Vokany, faly ny olona fa handeha ho any Ambohijatovo indray. Nandika avy hatrany ny efa nosoratako tao hoe: "Nampitandrina aho ny tsy idirana na oviana na oviana amin'izay mety hitarika herisetra, na ny fanaovana herisetra satria fantatra ny tsy fahatomombanan'ny fifandaminana ao amin'ny tolona hamerenana ny ara-dalàna" ny zavatra natao. Moa tsy izay indrindra ve no nitranga tamin'ny zoma 11 septambra 2009 sy ny asabotsy 12 septambra 2009? "Tenenina foana fa he-e-eh!"
Nandritra ny herinandro dia nilalao ara-kiafina sy fanenjika tamin'ny mpitandro ny filaminana, nanome vahana ny mpanakorontana teny Analakely fotsiny, ireny mpanakorontana ireny anie ny hanao barazy hakana vola no mahamay azy fa tsy mahalala izay tolonao any izy e! Nandeha teny ny andro, teo dia tsy fantatra loatra, varimbariana ve ny mpitolona sa leon'ny baomba mandatsa-dranomaso, fa tena adino mihitsy ny fivoriana fifanentanan'ny mpiara-mitolona. Nitendry vatamarobokotra (clavier) indray ny tena handefa ny hafatra mitondra ny lohateny hoe: "tsy henatra akory ny maka bahana" tamin'ny 18 septambra 2009 satria nilaina ny fanetre-tena hiverina indray eny Ankorondrano Auditorium. Nandritra io fotoana io tokoa, nifanentana ny olona ary nandefa antso tamin'ny radio mba hisian'ny hetsika eny Ankorondrano indray. Nohenoina ny antson'ny maro ary dia notanterahina indray izany ny alakamisy 24 septambra 2009.
Tonga tokoa ny fotoana, mbola tsy maro tahaka ny taloha ny olona tonga teo, tsapa ho ningaingaina fatratra anefa ny andro ary dia ny hain'andro izany no tena mianjady amin'ny mpitolona. Mbola tsy vory tsara akory ny mpitolona rehetra dia raikitra avy hatrany indray ny filazana tamin'io fotoana io fa nanao taratasy fangatahana ny kianjaben'i Mahamasina ny ankolafy telo tonta (fomba filaza fa toa ny ankolafy Zafy Albert sy ankolafy Ravalomanana ihany no hitan'ny olona) ary ekena izany ho amin'ny asabotsy 26 septambra 2009. Inona sahady ary ity, hoy aho anankampo, ary dia niteny tamin'ny olona akaiky ahy aho hoe jereo tsara raha hisy izany Mahamasina izany fa ny miaramila sy ny zandary indray no te-hitoratoraka baomba mandatsa-dranomaso aminao, mba tsy ilazako hoe atosiky ny mpitarika indray isika mba hitomany sy ho leon'izany mitolona amin'ny alalan'ny fivoriana eny Ankorondrano izany. Tsorina etoana fa tamin'io andron'ny alakamisy io dia nihorakora-pandavana ny legalista tonga tao Ankorondrano fa ireo mpitarika tao no nanitrikitrika fa efa am-pelatanana mihitsy ny taratasy. Tsy teto an-toerana ny tena tamin'io fotoan'ny asabotsy manaraka io saingy iarahan'ny rehetra mahalala ny tohiny. Dia voafandrika indray ny legalista ka hoy aho nisento hoe: "Tenenina foana fa he-e-eh!"
Amin'izao fotoana izao indray, taitaitran'ny hevitry ny sasany hoe hitsena ny solontenan'ny SADC amin'ny alalan'ny horakora-panoheran'ny dinôzôro politika vitsivitsy milaza ny tenany ho "Herin'ny fanovana" eny amin'ny lalana andalovan'ireo vahiny ireo hatreny Ivato izao indray ny "sasantsasany" amin'ny legalista, sy ny mpitarika azy, dia tsy te-hanaiky lembenana fa mihevitra hitondra sora-baventy hitaky ny fampiharana ny satan'ny tetezamita nosoniavina tany Maputo ihany koa. Asangodingodin'ny haino aman-jery amin'ny Asabotsy na alatsinainy na talata ireo mpanelanelana ireo no ho avy dia efa saritaka ho an'izay mihevitra ny handeha any indray izany. Dia mbola tsy hinoan'ny legalista teny indray ve aho raha hilaza fa mbola fandrika mivelatra ho azy, hivoaka ny kianjan'ny ara-dalàna eny Ankorondrano, indray izao mody fanentanana hitsena ny ahiny eny Ivato izao? Voalohany: raha samy ho tonga eny ny roa tonta dia tsy maintsy hisy ny fifandrangitana ary hisy ny tsy hahatanty, na mody misy mandefa tora-bato tampoka avy any dia fifanjevoana tanteraka no no tohiny, tsy hanelanelana velively ny mpitandro ny filaminana fa hanampy ny TGV. Noho izany: raha mba manana fahendrena tsy hampifandrafy ny samy Malagasy ihany koa ny milaza ny tenany fa mpitondra eto Madagasikara dia manana adidy handrara ny rehetra tsy hanao fihetsiketsehana amina toerana iray (Ivato seranana) amin'io fotoana io.
Raha mitady ny hisian'ny ady an-trano eto Madagasikara indray moa ry zareo dia tokony hanao fanentanana makotroka amin'ny fitsenam- panoherana ny SADC izay tiany atao. Dia tahaka izany ihany koa no lazaiko amin'ny legalista rehetra na mpitarika na olo-tsotra: raha tianareo ny hisian'ny ady an-trano nefa ianareo tsy manana fitaovam-piadiana mba hiarovan-tena mifanentàna hitsena eny Ivato seranana ihany koa, fa tsy mijanona eo amin'ny Magro Ankorondrano, mba hanaovan'ny sasany tambabe sady lavidavitra ihany ny toerana. Ny ahy moa ny mba faniriako ao anatin'izany rehetra izany dia ny tsy hitenenako fanintelony (Jamais deux sans trois moa?) hoe: "Tenenina foana fa he-e-eh!"
jentilisa, Antananarivo 02 oktobra 2009 amin'ny 01: 22 maraina